Admission usoro & chọrọ na Ukraine - Education Bro
Admission usoro & chọrọ na Ukraine
Admission chọrọ na Ukraine
Admission chọrọ na Ukraine bụ nnọọ mfe, na ha kwetara usoro oke.
Ndaba nke Passport ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị maka 1 afọ.
Ị ga-getEducational Documents (O larịị / SSCE / HSSC, Bachelor ma ọ bụ nna ukwu Degree ma ọ dị)
UPD: ebe ọ bụ na 2016 mbanye usoro ke Ukraine mahadum n'ihi na ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ aviable via Ukrainian Admission Center. Official Ukraine nzukọ maka mba ọzọ ụmụ akwụkwọ.
Admission Ịtọ oge
Ukrainian mahadum amalite inye "Òkù Letter" site March / April kwa afọ.
Universities anabata Ngwa maka Study si ọnwa nke January maka September oriri. Admission na visa na-ga-adị mfe na "Òkù Letters" maka ụmụ akwụkwọ na-eme site na anyị mbụ ma inye ha "Òkù Letters" si họọrọ / atụ aro Universities karị. The Universities na-esite "Òkù Letters" akwụkwọ ozi ndị si March / April ka November (ukwuu n'ime eru December). Mgbe March / April, ọ na-ewe banyere 3 -arụ ọrụ ụbọchị inye ihe "mụwara gị" akwụkwọ ozi si a họọrọ / atụ aro University.
The ọmụmụ na-amalite site 1st September. Foreign ụmụ akwụkwọ na-ekwe isonyere ha English Ọkara Omume ruo mgbe 15 nke nke November. Ụmụ akwụkwọ bịarutere mgbe 15 nke nke November pụrụ isonyere Preparatory Programme naanị.
The ụmụ akwụkwọ mgbe niile kwesịrị inye ha nti nzi ozi adreesị & kọntaktị nọmba na Application ụdị n'ihi na mahadum.
Mgbe e Òkù akwụkwọ ozi
Nwa akwụkwọ a kwesịrị ịkpọtụrụ Ukraine ọrụ nnọchite anya obodo-ya / mba ya iji ide maka akwụkwọ visa. Ukraine ọrụ nnọchite anya obodo amalite ịnakwere Student Visa Ngwa na nke Student Visa si May / June na na-na-esite ruo mgbe 15 nke November. Ná mba ụfọdụ Ukraine ọrụ nnọchite anya obodo amalite arụ ọrụ na Student Visa Ngwa na nke Student Visa site 15 nke August ka 15 nke November (-emekarị ọ na-eru December / January). -Esonụ akwụkwọ a ga-osụk ke Ukraine Embassy iji nweta a Student Visa,
Documents chọrọ on abịa:
-Atụ aro International Ụgbọelu na Ukraine : Kyiv (Boryspol ọdụ), Dnepropetrovsk, Odessa na Kharkiv.
The akwụkwọ ga ijide n'aka nke na-eweta ihe niile ịkwụ ụgwọ na Documents kpọrọ aha n'okpuru ma ọ bụghị na Ukraine Immigration Authority nwere ike jụ ya / ya Entry ma ibula azụ ya / ya na obodo The akwụkwọ ga-eme ka zuru nkuzi ego, ulo ego na ndị ọzọ ụgwọ (Ego nkịtị ma ọ bụ Travel Cheques). Mata ihe nile a tupu gị mahadum. The akwụkwọ na-ajụ ya ajụjụ ọdụ Immigration ọchịchị banyere nkuzi ego na ihe ndị ọzọ ebubo. The akwụkwọ ga-eme ka ụfọdụ mmezi ego maka onye na-. Ị pụrụ ịmụta anyị nkwanye banyere -eri nke bi na Ukraine.
Internationall Passport / ejegharị akwụkwọ na Ukraine Visa na ya (nti -ọ bụghị ihe na-erughị otu afọ)
Original Òkù Letter nke University
Birth Certificate , Sụgharịa Ukraine asụsụ na nkwado iwu site notari Public ma ọ bụ Ukraine Embassy. (The amụrụ bụ isiokwu na-eme ka a sụgharịa akwụkwọ Ukraine ma ọ bụrụ na Ukraine Embassy chọrọ nsụgharị n'oge nke na-esite Visa)
Original School Asambodo ( O larịị / SSCE / HSSC, Bachelor ma ọ bụ nna ukwu Degree ma ọ dị ) sụgharịa Ukraine asụsụ na nkwado iwu site notari Public ma ọ bụ Ukrainian Embassy (The amụrụ bụ isiokwu na-eme ka a sụgharịa akwụkwọ Ukraine ma ọ bụrụ na Ukraine Embassy chọrọ nsụgharị n'oge nke na-esite Visa)
General Health- Medical Certificate nyere dịkarịa ala ọnwa abụọ tupu ọnụ ụzọ na Ukraine sụgharịa Ukraine asụsụ na nkwado iwu site notari Public ma ọ bụ Ukrainian Embassy. (The amụrụ bụ isiokwu na-eme ka a sụgharịa akwụkwọ Ukraine ma ọ bụrụ na Ukraine Embassy chọrọ nsụgharị n'oge nke na-esite Visa)
HIV- AIDS-ezighị Certificate nyere dịkarịa ala ọnwa abụọ tupu n'ọnụ ụzọ sụgharịa Ukrainian Language na nkwado iwu site notari Public ma ọ bụ Ukrainian Embassy. (The amụrụ bụ isiokwu na-eme ka a sụgharịa akwụkwọ Ukraine ma ọ bụrụ na Ukraine Embassy chọrọ nsụgharị n'oge nke na-esite Visa)
Health Insurance ekpuchi otu afọ / maka mba ụfọdụ naanị maka ejegharị oge
Nkwado Letter si nne na nna / Onye na-aga ibu mmefu maka amụrụ n'oge ọnụnọ / amụ na Ukraine . (Ọ bụghị a ọnọdụ niile mba)
Bank Statement iji gosi ego ike. (Ọ bụghị a ọnọdụ niile mba)
12 Passport size foto (3 * 4 cm )
Air Ticket irè n'ihi na otu afọ, ga-na-efegharị efegharị
Migration kaadị ga-ejupụtakwa na site na-amụrụ na mbata na Ukraine ma na-zọpụtara n'oge ọnụnọ ke Ukraine.
The akwụkwọ ga na-enye aka Immigration ọchịchị mgbe ọ lọghachiri n'ụlọ ma ọ bụ na-eme njem si n'ala.
Admission usoro na Ukraine
Òkù akwụkwọ ozi example.There dị ole na ole na nsụgharị nke akwụkwọ ozi.
Iji nweta mbanye bụla University of Ukraine e nwere ihe atọ:
ntụpụ ụkwụ 1: Olee otú iji nweta òkù akwụkwọ ozi
Iji nweta òkù akwụkwọ ozi si n'aka bụla University of Ukraine ị kwesịrị ịkpọtụrụ mahadum nnọchiteanya ma ọ bụ izi mmadụ. Ị nwere ike kọntaktị anyị na anyị ga na-akwado gị mma gị n'ụlọnga maka Ukraine mahadum.
ntụpụ ụkwụ 2: visa
Mgbe na òkù akwụkwọ ozi si n'aka mahadum ma ọ bụ ha elekọta mmadụ na ụmụ akwụkwọ kwesịrị ịkpọtụrụ ka kacha nso Ukraine Embassy ma ọ bụ Nnọchianya.
Akwụkwọ a kwesịrị emetụta Ukraine ọrụ nnọchite anya obodo na ndị na-esonụ akwụkwọ:
Original Òkù ozi
Original mba paspọtụ (irè n'ihi na otu afọ)
Higher Secondary School akwụkwọ (sụgharịa Ukraine asụsụ)
Birth Certificate (sụgharịa Ukraine asụsụ)
Medical Certificate egosi enweghị Ọrịa Aids / HIV (sụgharịa Ukraine asụsụ) • Medical Certificate egosi ahụ ha na ụbụrụ mma (sụgharịa Ukraine asụsụ)
ntụpụ ụkwụ 3:mbata
Mgbe na visa si Ukraine ọrụ nnọchite anya obodo ma ọ bụ Nnọchianya, ụmụ akwụkwọ ga-agwa ha elekọta mmadụ banyere ya / ya elu nkọwa na ụbọchị na mbata oge.
Admission usoro nwere ike ịbụ na-enweghị mmadụ. ma “EducationBro” magazine ike ịkwado mee mbanye na mmadụ na-enyere.
Education na Ukraine bụ dị ọnụ ala na Europe na gị n'ụlọnga ọrụ dị ọnụ ala oke. Nke bụ eziokwu bụ na iji ọrụ nke onye gị n'ụlọnga, ị ekwe nkwa onwe gị a visa na mbanye nke University. Agents mara nile nuances na enyere gị aka izere nsogbu ọ bụla. Ọ bụrụ na ị ga-eme onwe gị, mgbe ahụ e nwere a elu puru na ị ga-eme ka a ndudue na-atụfu oge na ego.
Ọ bụ naanị anyị nkwanye. Ọ bụ gị kpebiri. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị na-apụghị ime mkpebi ma ọ bụ obi abụọ n'ime ike n'ezi ihe nke gị mmadụ. Anyị consultations bụ n'efu. Anyị bụ ndị a nonprofit nzukọ na ndị njikere mgbe nile inyere ndị mba ọzọ ụmụ akwụkwọ.
Ike bara uru n'ihi na ị
TOP 7 technical mahadum Ukraine 2016
Gịnị mere ọmụmụ na Ukraine?
Usoro agụmakwụkwọ na Ukraine